ကျွန်တော်တို့မှာ အိပ်မက်တွေ ရှိပါတယ် | mg naing naing
mg naing naing
ကျွန်တော်တို့မှာ အိပ်မက်တွေ ရှိပါတယ်
designernka / March 23, 2017	ကျွန်တော် ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို layout design ဆွဲပေးရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ အစပြုလိုက်တာဟာ တခြားရည်ရွယ်ချက် ဘာမှ မရှိတာ အမှန်။ တကယ် တော့ ဒီလိုအစပျုးိလုက်မှ ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောလို့သင့်မှာ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ပါ။
ကျွန်တော်မှာ တစ်ဦးတည်းသော သမီးကလေး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ အိမ်လေးထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ သမီးလေးပေါ့။ ခုဆို သမီးလေးက တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို ရောက် လာပါပြီ။ သမီးလေး မမွေးဖွား ကျွန်တော့်ဇနီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရစဉ် သမီးမိန်းကလေး မွေးမယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်က စပြီး ကျွန်တော်တို့ မှာ သမီးလေးအတွက် အိပ်မက်လေးတွေ ရှိကြပါ တယ်။ သမီးလေးကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မယ်။ ဘယ်လိုလမ်းညွှတ်ပြသပေးမယ်။ ဘယ်လို ပညာတွေ သင်ပေးမယ် ဆိုတာက အစပေါ့။ ခုသမီးလေး တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ သမီးလေးရဲ့ အပြုအမူတွေကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာအကဲခတ်မိတယ်။ ကျွန်တော် ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ပဲ ပြောရမလား မသိ။ သမီးလေးကို ကျွန်တော်နဲ့ သိပ်တူစေချင်ပါ တယ်။ ယေဘုယျအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သမီးလေးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့ သိပ်ကို တူပါတယ်။ စားတာသောက်တာ၊ နေတာ ထိုင်တာနဲ့ စိတ်သဘောထားပုံစံကအစ အများဆုံး တူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးနဲ့တော့ ရုပ်ချင်းအင်မတန် ဆင်တူပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော် အင်မတန် ဝမ်းသာပါတယ်။ အမေတူ သမီးချောလေး တစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရခဲ့လို့လေ။ နည်းနည်းကြွား သလိုများ ဖြစ်သွမလား မသိ။
ကျွန်တော်ဟာ ၉ နာရီ ရုံးတက်အလုပ်သွားပြီး ညနေ ၆ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တတ်တာ်မျိုးပါ။ ညဘက်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်ဟာ ကွန်ပျူတာ ရှေ့ထိုင်ပြီး ကျွန်တော် ဝါသနာပါရာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ခြင်းများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံ ရေးဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကိုပဲ သမီးလေးက မှတ်မှတ်သားသား ရှိလှတယ် ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ ရှေ့ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော် သမီးကို ချီသွားရင် အတင်း အောက်ကို ဆင်းပြီး ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်နဲ့ မောက်စ်ကို ကျွန်တော် နှိပ်သလို ဟန်ပန်အတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန် တခြား ဘယ်သူမှ ခေါ်လဲ မရပါဘူး။ မလိုက်တော့ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ရာမထ လုပ်နေတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ပြောပြမှုအရ သမီးလေကို မော်နီတာ အလင်းရောင်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့ခွင့် မပေးဘဲနဲ့ သမီး ကွန်ပျူတာ နှိပ်တဲ့အချိန်တိုင်း ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကို shutdown လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ သမီးလေးက သူ နှိပ်လိုက်လို့ ရုပ်မပေါ်ရင် ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်ပြီး ဟင့်ခနဲ ဟမ့်ခနဲ ပြန်လုပ် တတ်ပါတယ်။ သမီးလေး ဒီလိုလုပ်တိုင်း သြော် ငါ့သမီးက ငါနဲ့ သိပ်တူတာပဲလို့ ထင်မြင်ယူဆမိတတ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကလေး သဘာဝအလျှောက် လူကြီးတွေရဲ့ အပြုအမူကို လိုက်ပြီးစူစမ်းလေ့လာမျိုးပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် ပထမဆုံး ရင်သွေးလေး မဟုတ်လား။ သားဦး အရူးဆိုတဲ့ မိဘတွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အဖြစ်သနှစ်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စကားပုံလည်း ရှိပါရဲ့လေ။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်အချိန်ကတည်းကလည်း ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းအလုပ်တွေကို ကြည့်ပြီး
နောက်ကွယ်ကနေ ဗလာစာရွက်တစ်ရွက် ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့ ပုံစံတူ လိုက်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သမီးလေး ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ သုံးသလို ဟန်ပန်အတိုင်း လိုက်လုပ်သည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က အဖေ့နောက်ကွယ်ကနေ အဖေ့ရဲ့အပြု အမူအတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်တာလေးကို အမှတ်ရ မိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ သိပ်ကိုခေတ်စားလှတဲ့ အရာဝတ္တု မဟုတ်ပါဘူး။ တော်ရုံသင့်ရုံနဲ့လည်း အိမ်မှာ ဝယ်သုံးလေ့ရှိတဲ့ အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တောင် အထက်တန်းကျောင်းသား အရွ
်လောက်မှ စတင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အရာမျိုးပါ။ ခုတော့ နည်းပညာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက် မျိုးဆက်တွေအတွက် အူဝဲဆိုတဲ့ အချိန်ကတည်းက သူတို့လေးတွေနဲ့အတူ လိုက်ပါတွဲလျက် ကြီးထွားလာမယ့် ဖွားဖက်တော်လိုတောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ နည်းပညာရဲ့ တိုးတက်မှုနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ ဟန်ချက်က တစ်ချက်ချင်း စည်းချက်ညီညီနဲ့ ကိုက်ညီ နေသလားလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။
ဖုန်းစကရင်ကို လက်ညိုးလေး တစ်ချောင်းနဲ့ ထောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ဖုန်းသုံးသလို သမီးလေးလည်း အတုမြင်အတတ်သင် လိုက်လုပ်နေ တတ်ပါပြီ။ ပြီးတော့ ဖုန်းပြောသလို သူ့ရဲ့ လက်ဖဝါးလေးကို နားမှာ အုပ်ပြီး အင့် အန့်နဲ့ စကားပြောနေတတ်တာကလည်း သမီးလေးရဲ့ အတုမြင် စူးစမ်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တုန်းက အပြေးအလွှား လိုက်ခဲ့ရတဲ့ နည်းပညာဟာ သူတို့လေးတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ရိုးစင်းလွယ်ကူနေသလားလို့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် တွေးမိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ခေတ်နှစ်ခေတ်ရဲ့ကြားက ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ကျွန်တော်တို့ သမီးလေးအပေါ် ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား တွေကို ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ လိုအင်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ် ထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြမှာ မဟုတ်ဘဲ သမီးလေးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုသာ ဦးစားပေးလိုက်ရောမိမှာ အသေအချာပါပဲ။
Share this:TwitterFacebookGoogleLike this:Like Loading...	March 23, 2017 in Essay. Related posts
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ . . .
အဇၥ ်တၱမွာ ခို၀င္ေနတဲ့ အမွန္တရား
← အဇၥ ်တၱမွာ ခို၀င္ေနတဲ့ အမွန္တရား	ျမစ္ →